Diblomaasiyiin u dhashay reer galbeed oo shaaciyay arrin sumcadda dowladda Soomaaliya hoos u dhigi karta – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Diblomaasiyiin u dhashay reer galbeed oo shaaciyay arrin sumcadda dowladda Soomaaliya hoos u dhigi karta
Diblomaasiyiin reer galbeed ah oo aan magacooda la sheegin ayaa laga soo xigtay in hubka ay dowladda federaalka Soomaaliya soo iibsato, in lagu sii iibiyo qeybo ka mid ah suuqyada madoow ee magaalada Muqdisho.
Wakaalada wararka Reuters oo warkaan faafisay ayaa kasoo xigatay laba diblomaasi in hubka fudud ee Qaramada Midoobay ay hore ugu fasaxday dowladda Soomaaliya inay soo iibsato, si ay ugu qalabeeyso ciidamada Soomaaliyeed uu qaar ka mid ah ku dambeeyo suuqyadda madoow ee Muqdisho ee hubka lagu iibiyo.
Labadaas diblomaasi ayaa Reuters u sheegay inay haayaan caddeymo sawirro ah oo ay ku xiusaabeen in 35 ilaa 40% qoryaha daran-dooriga u dhaca iyo hubka fudud ay dowladda federaalka Soomaaliya soo dejisatay haatan iib ahaan looga helayo suuqyada madoow ee hubka ee magaalada Muqdisho.
Dhinaca kale, la-taliyaha madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ee arrimaha siyaasada Aweys Xaaji Yusuf ayaa la sheegay inuu qirtay jiritaanka hub la leexsado oo suuqa madoow lagu iibiyo, laakiin aanu badneyn isla markaana aanu ahayn mid joogto ah.
Sidoo kale, saraakiisha Qaramada Midoobay ayaa ka gaabsaday inay wax faah-faahin ah ka bixiyaan dhacdada la xiriirta caddeynta loo hayo in hubka fudud iyo kuwa daran-dooriga u dhaca ee dowladda federaalka soo iibsado lagu sii iibinayo suuqyadda madoow ee hubka ee magaalada Muqdisho.
Si kastaba ha ahaate, arrintaan eedeymaha ah ayaa imaanaya xilli Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay sanadkii 2013-dii ay Soomaaliya ka qaadeen qeyb ka mid ah cuna-qabateyntii hubka aheyd ee saarneyd tan iyo sanadkii 1991-da, kadib markii uu dalka ka dhacay dagaalkii sokeeye, waxayna arrintaasi QM kaga gol-laheyd si dowladda federaalka u qalabeeyso ciidankeeda dagaalka kula jira Xarakadda Al-shabaab.